Tontolo iainana : Resaka rano ao Afrika Atsinanana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 28 Jolay 2018 16:26 GMT
Sary avy amin'i Julien Harneis ao amin'ny Flickr, nampiasàna lisansa Creative Commons
Mizara ny fanambarana ofisialin'ny CSIR ilay blaogera, fa namaky ihany koa ny fanoloran'i Dr. Turton izy [pdf ao amin'ny environment.co.za], ary manao fanamarihana:
Manome ilay rohy mankany amina fanangonan-tsonia an-tambajotra ho fanohanana ny Dr Turton ny Urbansprout ary mamarana:
Manome vaovao bebe kokoa mikasika ireo olan'ny rano ao Afrika Atsimo ny lahatsoratra taloha nosoratan'ny Urbansprout, voamariky ny fitetevan'ireo toby fanadiovana any amin'ireo riandrano. Mamatsy avy hatrany ny tambajotra fizarana rano madio ny rano avy amin'ireo renirano ireo.
Raha amin'ny lafina teknolojika, faritan'ny blaogy BLDG ny WaterMill ho toy ny teknolojia vaovao ”mampiasa ny angovo herinaratra mitovy amin'ny takamoa telo eo noho eo mba hampifintina ny hamandoan'ny rivotra, hisambotra izany ary hanadio azy mba hahafahana misotro izany” . Omen'i Rory avy ao amin'ny blaogy Carbon Smart ny rohy mankany amin'ny BLDG , manadihady ireo ‘teknika-bitika’ toy ny an'ny WaterMill, ary manontany tena izy raha toa ka afaka hanome rano madio ho an'ireo tanàna io. Manoratra izy:
Mitondra antsika mankany amina vinany ny resaka momba ny WaterMill — fitaovana kely mpanala hamandoana izay misambotra sy manadio ny ranon'ny rivotra – : ampahany inona amin'ny fanjifantsika rano madio no mety ho avy amin'ny rivotra? Mety hisy fiantraikany lehibe eo amin'ny toetrandro bitika an-tanandehibe ve ny fametrahana dika aman'arivony amin'ity fitaovana mitsitsy angovo ity? Afaka mihevitra ve isika hoe ny Watermill aman'arivony dia mety ho afaka hanome antsika fahafahana tsy hampiasa fitaovana fandrindràna hafanàna (climatiseurs) mandany angovo be amin'ny fandraisana anjara amina tontolo iainana malefadefaka kokoa, ampiana fanaovana trano sy akanjo mifanaraka amin'izany, ny fambolena zavamaitso amin'ireo toerana natao ho an'ny daholobe sy ny fampihenana ny hamandoana manodidina antsika ?
Ao Afrika Atsinanana, averin'ny blaogy keniana Kenvironews ny lahatsoratra nosoratan'i Namhla Matshanda, avy ao amin'ny fandaharanasa African Security Analysis. Adihadian'ity lahatsoratra ity ny fifandirana izay ny ventiny amin'izany dia ny nosy Migingo ao amin'ny farihy Victoria, takian'ny Ogandà sy Kenya.